Gabadhii U Doonanayd Khashoqji Oo Gaashaanka U Daruurtay Go’aanka Maxkmadda Sacuudiga | Kaafi News
Gabadhii U Doonanayd Khashoqji Oo Gaashaanka U Daruurtay Go’aanka Maxkmadda Sacuudiga
Gabadhii u doonannayd Suxufigii la diley ee ahaa mucaaradka Sacuudiga, Jamal Khaashuqji, ayaa ku cambaareysay maamulka Sacuudiga xukunnada kama dambaysta ah ee la xidhiidha dilkii labo sano ka hor laga geystay magaalada Istanbul.
Raggan ayaa horey loogu xukumay xukun dil ah.
Qoraalka sawirka,Hatice Cengiz, gabadha u doonan Khashoggi
Dacwad oogaha guud ee dalkaas wuxuu sheegay in raggaas lagu riday 20 sano oo xarig ah maadama qoyska weriyaha ay cafiyeen.
Halka maxkamaddu ay ayidday xukun u dhexeeya 7 ilaa 10 sano oo lagu riday saddex qof ee kale.
Shan qof ayaa lagu riday xukun dil ah kuwaas oo la sheegay in si toos ah ay uga qeyb qaateen dilka halka saddex kalena lagu riday xukun xarig ah, waxaana lasii daayay saddex qof oo kale oo lagu wax dambi ah lagu waayay.
Wariyahan ah 59 jirka – oo si iskiis ah uga cararay Sacuudiga sanadkii 2017-kii, kuna noolaa Mareykanka, ayaa 2-dii bishii October, 2018-kii tagay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul, halkaasoo uu ka raadsanayay warqado u fududeeya guurka haweeney u doodaneyd oo lagu magacaabo Hatice Cengiz.
Qoraalka sawirka,Wiilkii u dhalay Khaashuqji ayaa la kulmay boqorka sucuudiga, toddobaadyo ka dib markii aabbihii la dilay
Waxay dalbatay in la sameeyo baaritaan caalami ah oo madax-bannaan